सम्बन्धबिच्छेद भएको झन्डै तीन बर्ष पछि पहिलोपटक पुर्वपत्नी मीनाको बारेमा दुखि हुँदै पोखे यस्तो दुखेसो ! – AB Sansar
December 15, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on सम्बन्धबिच्छेद भएको झन्डै तीन बर्ष पछि पहिलोपटक पुर्वपत्नी मीनाको बारेमा दुखि हुँदै पोखे यस्तो दुखेसो !
काठमाडौं – हास्य कलाकार मनोज गजुरेल र मिना ढकाल कानूनी रुपमा अलग बसेको ३ बर्ष भएको छ । हालै मनोजको बिहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यस पछि मिना ढकालले बिभिन्न आरोपहरु लगाएर मनोजप्रति सामाजिक सञ्जालमा खनिएकी छिन् । यस्तो देखेपछि मनोजले पहिलो पटक मिनाको बारेमा बोलेका छन् । उनले फेसबुकमा एक लामो स्टाटस लेखेका छन् । जसमा बुँदागत रुपमा आफ्ना कुराहरु राखेका छन् । यसअघि मनोज मिनाका बारेमा मौन रहँदै आएका थिए । **** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
सार्क मुलुकमध्ये श्रीलंकाको अनलाइन शिक्षा उत्कृष्ट